Iyunithi 3-NgeZoo, i-UC, iXavier, izibhedlele kunye namabala emidlalo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHappy To Host
Iyunithi ipheyintwa ngokutsha kwaye ihlaziywe kwaye ilungele ukuhlala kwakho! Iphangalele kakhulu iyunithi ye-2 ye-BR, ilala ukuya kuthi ga kwi-6. Ifaniswe nekhitshi ye-Stainless, iiTV ze-Smart kunye neelinen zodidi oluphezulu!
Ibekwe kwindawo esembindini kwaye ikufutshane nayo yonke into enokunikelwa yiCincinnati.... I-Cincinnati Zoo/Izibhedlele/iDyunivesithi yaseCincinnati/Xavier/Amabala emidlalo/eDowntown/Ngapha kweRhine/Aquarium/Downtown.
***NgeeBnB ezi-3 kwisakhiwo esinye, singakwazi ukuhlalisa amaqela ukuya kutsho kwi-18!!!
(Ukujonga amakhonkco, jonga "Ezinye Izinto omawuziqaphele" ngezantsi kwiiNKCAZO zethu)***
Ibanzi kwaye ihlaziyiwe iyunithi yegumbi eli-2 lokuhlambela enye, ilala ukuya kuthi ga kwi-6.
INTSHA EKUPHELELEYO—iifestile, umgangatho, ikhaphethi, iifenitshala, iikhabhathi, izixhobo zombane, iilinen, iibhedi, oomatrasi, imiqamelo, ipeyinti, izitya, iibhakaware, iiglasi, iiTV, iikhethini ezimnyama...
Kufutshane kakhulu neCincinnati Zoo/izibhedlele/iDyunivesithi yaseCincinnati/Xavier/Stadiums/Downtown.
Umbuki zindwendwe ngu- Happy To Host
Sifumaneka ngokuthumela imiyalezo, nge-inbox okanye ngeefowuni.
UHappy To Host yi-Superhost
Inombolo yomthetho: STR-36037